Madaxda Dalalka kenya, uganda iyo Gabon oo ku heshiiyay in lala dagaalamo ka ganacsiga faanka maroodiga | Risala FM-The Voice of Horn Africa
madaxda dalalka kenya, uganda iyo Gabon ayaa balan qaaday inay la dagaalami doonaan ka ganacsiga sharci darada ah ee foolasha maroodiga iyo sidii loo xirilahaa suuqyada lagu iibiyo foolasha maroodiga.
madaxweynaha dalka mr uhuru kenyatta dhigiisa dalka uganda yuweri kaguto museveni iyo madaxweynaha dalka Gabon Ali Bongo ayaa waxay sheegeen dagaal lala galo suuqyada sida sharci darada ah loogu iib geeyo foolasha maroodiga ay tahay sida ugu wanaagsan ee lagusoo afjarikaro ka ganacsiga sharci darada ah faanka maroodiga.
Madaxweynaha dalka mr uhuru kenyatta ayaa sheegay in suuqa loo yaqaano ivory market oo ah suuqa loo iib geeyo foolasha maroodiga ay xaqiijin doonaan in albaabada la isugu dhufto.
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in dawladiisa ay dabada ka riixi doonto in gabi ahaanba la xiro suuqa ivory market.
dalkani kenya ayaa horey uqaaday tallaabooyin lagula dagaalamaayo ka ganacsiga sharci darada ah ee foolasha maroodiga.
madaxdan ayaa shalay soo saaray sharciyo cusub oo lagula tacaalaayo ama lagu xakameeynaayo ka ganacsiga foolasha maroodiga.
madaxda sedexda wadan ayaa lagu wadaa inay ka wada niqaashaan qaabka ugu haboon ee lagula dagaalamikaro kuwa ugaarsiga sharci darada ah kuhaya maroodiga iyadoo dawlad walba ay qorsheeyn doonto tallaabooyin qaas ah ooy ku ilaalinayso maroodiga.
madaxweynaha dalka Gabon ayaa sheegay in ugaarsiga lagu hayo maroodiga ay maroodiga kadhigtay qaxooti taasina ay sii xumeysay rabshadaha udhaxeeya duurjoogta iyo dadkaba.